Ngaphansi komthetho, noma ibuphi ubuhlobo umsebenzi phakathi kwabaqashi kanye umsebenzi kufanele kube ngokubhalwe phansi. Lokhu kusebenza futhi nakulabo abaqashi abangamalungu engokomthetho noma asebenze njengomxhumanisi usomabhizinisi ngabanye. Okungaguquki eside futhi unomphela umsebenzi wenkontileka - amafomu amabili, liqine zamalungelo neembopho umqashi kanye isisebenzi. Ukuze kube isiphelo sesimiso ngamunye ethize uhlobo lombhalo kunezizathu lokuvela Code Labour. Nokho, umkhuba, abaqashi abaningi bathanda ukwenza inkontileka, isikhathi nomkhawulo. I-agumenti livame umsebenzi yesizini, noma okwesikhashana, kanye nezinye izizathu sisebenza ngokufanayo.
Zonke abahlanganyeli zabasebenzi kumele uqaphele ukuthi kukhona uhlu ezithile izimo kungase kube ngezizathu sokubhalisa inkontileka fixed eside. Lo myalo silotshwe TC. Kwezinye izimo kumelwe siphele inkontileka zabasebenzi unomphela.
Incazelo kanye Izinhlobo
inkontileka Employment ngokuthi ifomu yesivumelwano zamazwe amabili phakathi kwabaqashi kanye umsebenzi, echaza konke imisebenzi namalungelo abo.
Ngesisekelo ukuthi ifunani isikhathi ukulungiswa idokhumenti, kuyaphuthuma (STD) noma ongacacile (BTC). Ngokungafani kumele STD wahlangana ngaphezulu izimo sokuqeda inkontileka nanini. Umsebenzi noma umqashi kufanele uthathe isinyathelo futhi izizathu ezathonya igebe zabasebenzi (uhlu lokuvela Code Labour). Lokho akunakwenzeka ekunqanyulweni sohlangothi olulodwa.
Imininingwane yesivumelwano umsebenzi ongacacile (BTC)
Wobudlelwano Ikhodi siqukethe uhlu ubunikazi inkontileka nanini. Kulo mbhalo, kuze kube usuku lokuphela yayo aluboniswa. Lokhu kusho ukuthi uma amaqembu Azikho ezinye izicelo zokukhokhelwa komunye nomunye futhi musa ukushintsha imigomo yenkontileka, luhlala esemthethweni njengoba iminyaka ozidingayo.
Ngaphezu kwalokho, ekuphetheni inkontileka umsebenzi side nanini kakhulu likuchaza ngokuningiliziwe imisebenzi yabo, futhi ngokuhamba kwesikhathi ingase ishintshe.
izisekelo zomthetho, enika ilungelo ukuphothula isivumelwano umsebenzi phakade, yilezi:
Isifiso esashiwo zombili izinhlangothi.
isidingo njalo ibhizinisi kule umsebenzi.
Ilungelo yokubhaliswa zabasebenzi ngale ndlela. Lokhu kusebenza abadala umthamo wezomthetho abantu.
Uma kuziwa okuqasha nane ingane, akazange anikeze imvume yabazali noma umnakekeli, ngezizathu isiphelo sesimiso i umsebenzi wenkontileka nanini akukho.
Indlela bangena esivumelwaneni ka esinganqunyelwe: okukhokhwa
Inqubo ezilandelwayo kanye ukubulawa kwabo kuze kube nini nanini umsebenzi wenkontileka inalokhu izinyathelo ezilandelayo:
Ukulungiselela kwemibhalo, ngesisekelo okuyinto uyogcwala amagrafu sivumelwano (lokhu kufaka passport, amarekhodi omsebenzi, amadiploma nezitifiketi wezemfundo, SNILS).
Ukuthuthukiswa kanye nokulungisa idokhumenti.
Isivumelwano, basayine umqashi kanye inkontileka umsebenzi.
izinto ezifana kungadingeka ukulungiswa inkontileka umsebenzi:
Lowo Mbhalo wangonyaka we esiqinisekisa isisebenzi (iphasipoti, lokuhlala).
Ubufakazi ziqu umsebenzi, ebonisa ikhono lakhe lokufeza lo msebenzi imisebenzi (diploma, imvume yokusebenza, ngesitifiketi sokuqeda).
Umsebenzi-ncwadi. Esimweni lapho lowo msebenzi akudingeki idokhumenti, okungukuthi, inkampani ngaye imisebenzi wekucala, isibopho womqashi kuba elikhiphe irekhodi lakhe umsebenzi.
Isitifiketi yomuntu umshwalense impesheni.
inombolo kamazisi (kusebenza amathuluzi non-esibophezelayo).
Ngezinye izikhathi izinkontileka zokuqashwa nanini kungenziwa kuphela waphetha uma kukhona imibhalo ezengeziwe. Ngokwesibonelo, lapho esebenza imikhiqizo ukudla umfakisicelo kumele ahlinzeke isitifiketi ngihlolwa, umsebenzi kwabancane akunakwenzeka ngaphandle kwemvume ebhaliwe umzali noma umlondolozi, kodwa uma ufuna ukuthatha isikhundla isakhiwo kombuso kuzofanele idokhumenti esiqinisekisa kungekho nerekhodi lobugebengu. Kungase kube isitifiketi kudingekile isimo umndeni, kusukela neuropsychiatric noma narcological. Uma umqashi kudinga le mibhalo ngokomthetho, sisebenti asikufanele senqabe abenzele.
Levulekile inkontileka kuziwa phakathi force kusukela ngosuku lapho umsebenzi wenkampani uzoqala ukuba bafeze imisebenzi yabo. Umthetho akusho ukusungula uhlobo ecacile leli phepha ukuze bangabhekani.
Inkontileka okuqasha esinganqunyelwe: iphethini futhi isakhiwo
Ngokuvamile ezilandelwayo izinkontileka zokuqashwa abasebenzi HR ukusebenzisa amasampula ukuthi itholakala mahhala. Uma kunesidingo, ulungise them ngaphakathi accordance nga imininingwane inkampani ethile.
Naphezu kweqiniso lokuthi isampuli akhethiwe yesivumelwano nanini ilula, okuqukethwe yayo, qiniseka ukuhlola. Lowo Mbhalo wangonyaka we kumele lwentiwe ikhumbula yonke imithetho.
Isakhiwo jikelele nokuhleleka kwendawo izinto zimi kanje:
Isihloko yesivumelwano. Lapha uchaze okushiwo isikhundla umsebenzi.
Isikhathi isivumelwano. Ukutholakala kwale nto, ugcizelela inkontileka levulekile.
Incazelo amalungelo nemisebenzi isisebenzi.
Amalungelo nezibopho umqashi.
Uhlu amakghono Isivumelwano Izivikelo. Lapha abonisa izehlakalo yezinto (izingozi emsebenzini, ucabanga inkampani, njll), kanye izinzuzo kanye iziqinisekiso okufanele kuhlinzekwe uma ukuqaliswa yabo.
Luhlelo amahora ukusebenza nezikhathi lonke (inani lezinsuku zokusebenza nangezimpelasonto, sekhefu lasemini, amaholide).
Esimweni lapho izisebenzi kubuthwa yokubakhona kwesikhathi ukuhlolwa, kufanele kushiwo idokhumenti. Ufaka lolu lwazi kwesokunxele kuya ngokubona umbhali: Ungakwazi ukwakha into ehlukile noma nifaka esimisweni umsebenzi kanye nokuphumula.
Isithombe esingezansi sibonisa isampula inkontileka levulekile jikelele.
Semthethweni dokhumenti ulahleke khona misprints kanye / noma okubhala. Kuphela uma zingekho imininingwane esibophezelayo kungaholela yokuthi okuyothiwa ezingavumelekile (usuku, isignesha, isitembu).
Ukuhumusha umsebenzi nge inkontileka BTC
Kaningana, isisebenzi inkampani sele asebenze isikhathi esithile, evinces isifiso ukuhlala nenkampani isikhathi eside. Nge kwemvume umqashi kungenziwa zihunyushelwe inkontileka fixed eside esinganqunyelwe.
Kwezinye izimo, le nqubo engenziwa ngisho nokuba khona ukuphikisana ngumqashi.
Indlela ukushintsha imigomo yenkontileka
Uma umqashi Akahlosile siqhubeke sibambisane isigqila, uyakunikela azise kuye ukuxoshwa olusondelayo izinsuku ezintathu ngaphambi kosuku lokugcina yesivumelwano fixed eside. Ukuhumusha elula abasebenzi nge inkontileka fixed eside afeze isivumelwano unomphela, indiva ukuqedwa kwesivumelwano.
inkontileka okungaguquki eside iba nanini, uma isikhathi sakho sokuba semthethweni siphelile, kodwa umsebenzi uyaqhubeka enza imisebenzi yayo ibhizinisi. Lokho, kobudlelwano emsebenzini empeleni washintsha.
Kulokhu, lo mngcele ezishiwo idokhumenti, aye alahlekelwa incazelo nencazelo yalokho kwaba isizathu sokuba kubhekwe inkontileka saphakade.
Kumele kucaciswe ukuthi izivumelwano fixed eside ayikwazi izoqedwa ngendlela okuzenzakalelayo. Le nqubo inikeza ukwethulwa ezifanele amarekhodi umsebenzi, ukushicilela oda yokuxoshwa, kanye ukuqaliswa komnikazi nomsebenzi.
Lapho inkontileka levulekile wangena singasebenzi nganoma non-ukugcinwa imithetho ekunqanyulweni yesivumelwano, isisebenzi sikaHulumeni kufanele kubhekwe ilungu agcwele ibhizinisi. Wenza wonke amalungelo amalungelo, kanye nokukhokhwa okucatshangwa isinxephezelo kanye nemivuzo etholakala.
Ukuze isisebenzi esinjalo, umqashi kufanele okugxile ezimweni ezivamile kuleli TC.
Uma inkontileka fixed eside akukhona esiphuthumayo
Usuku ukuthi inquma ekupheleni kwenkathi nokubambisana oluphakathi komqashi kanye nomsebenzi, yisimo ebalulekile izinkontileka. Kuphela inkontileka levulekile ayiqukethe lolo lwazi.
Esimweni lapho usuku ukuphela kwenkontileka uvuliwe (umqashi ayicacisiwe), futhi azikho nemibandela ubunjalo esiphuthumayo umsebenzi, idokhumenti sakhiwa zingatholakala BTC.
Ukulahlwa umsebenzi ukusebenza ngaphansi kwaleso sivumelwano, ngenxa kwaqedwa yesivumelwano kuwukwephula umthetho. Ukuvikela akanacala ukuba aye enkantolo.
Uma izimangalo ummangali atholakala be semthethweni, umphumela uyoba ukuqashelwa yesivumelwano umsebenzi saphakade, kanye nokubuyiselwa kwabasebenzi sichithiwe emsebenzini ofanayo. Lapho ebuyela inkampani, isisebenzi sikaHulumeni zingalindela ukukhokha inkokhelo izinsuku lapho engasakwazi nokusebenza. Ngaphezu kwalokho, umqashi ziyophoqeleka ukuba nxephezela kuye ngoba umonakalo zokuziphatha.
Ingabe kungenzeka ukuvuselela inkontileka fixed eside ngokuphindaphindiwe
Abaholi izinkampani eziningi ngokuvamile ziphendukela umkhuba yokuvuselela izinkontileka fixed eside ukuba sifeze umsebenzi ofanayo. Le nqubo ibizwa njengokwephula umthetho.
Ukuze usayine inkontileka entsha kuvunyelwe kuphela esimweni lapho kufika isikhathi sokuba isenzo wangaphambili sesidlulile, kodwa inkinga wahlala ezingaxazululeki noma akuphelelanga.
Lapho umsebenzi, owathatha nsuku yesikhashana, isibe Eqinisweni unomphela, ukusebenza esiphakade sivumelwano (STD renegotiated) kungenziwa obonwa ezinkantolo.
Uyini sivumelwano esengeziwe
In the ukungabikho ukungaqondani nasekulondolozeni izikhalazo phakathi komqashi kanye nomsebenzi ngesinqumo jikelele ukuqhubeka UKUBAMBISANA ngesisekelo izinguquko izimo inkontileka fixed eside. Lokhu kungenzeka esebenzisa ekubhaleni isivumelwano olwengeziwe.
Lowo Mbhalo wangonyaka we kubonisa isizathu basisebenzisa njengeHholo ngesisekelo ekushintsheni isimo isisebenzi. Point ukuthi manje kubhekwa inkontileka nanini isikhathi inkontileka, liyisici esiyisibopho sivumelwano eyengeziwe. Isiphetho le dokhumenti kungenzeka kuphela ngemuva umsebenzi vykazhet imvume ngokubhala.
Inqubo ngenjongo yokuyohlelekela sivumelwano esengeziwe isuke ibangelwa Code Labour. Umbhalo kufanele kufake umusho esishoyo ukuthi kusukela ukuthi inkontileka iphuzu fixed eside waphetha ngaphambili kumele kuthathwe njengento yaphakade. izimo okusha Emsebenzini kungase futhi apelwe esivumelwaneni.
BTC akukwazi inkontileka
Ngu ekuhumusheni umsebenzi kwenye indawo, umqashi kufanele ukhiphe umyalo ukuze uthumele. Njengoba sihambisana nale, okufakile olusha luvela encwadini yomsebenzi.
Ukushintsha uhlobo inkontileka (fixed eside nge nanini) asikwazi kuthathwe njengendlela ushintsho ngoba uhlobo kanye nenani Ukudluliselwa kulesi sikhwama, kanye amarekhodi amahora ukusebenza akukashintshi.
Isici esikhethekile wema sivumelwano zabasebenzi iba asihlehliseki ukuguqulwa kwakhe. Lokhu kusho ukuthi uma isivumelwano esimi kuze kube nini, umqashi ayinakho enelungelo lokubekela ungabeki mingcele isikhathi sokusebenza yayo.
Abasebenzi abaye yalahla sichithiwe, kusolakala ukuthi ngenxa buyisa amalungelo abo enkantolo inkontileka usuphothuliwe. Ngemva ezinye uphenyo, yokuqinisekisa kwemibhalo nithole mayelana nesimo sezindaba isinyathelo eqiniso angase enganeliseki njengokufa. Umphumela walokhu uyoba ukubuyiselwa umsebenzi kule sikhundla nokukhokhwa kwezintela isinxephezelo nikubeke ezinhliziyweni zenu.
Indlela ukwenza umyalelo ukushintsha uhlobo inkontileka
Ukwenza isinqumo ukuze uthumele umsebenzi nenkontileka i inkontileka nanini kuhambisana ukushicilelwa oda efanele. Umbhali wayo yena uba umphathi, HR Officer noma imenenja HR.
Okuqukethwe oda uthi semthethweni zokushintsha uhlobo inkontileka umsebenzi.
Ngaphezu kwalokho, izinto le dokhumenti embule izizathu izenzo ezinjalo (inkontileka awuzange renegotiated, amaqembu wafika esivumelwaneni on the umsebenzi wathola isitatimende esibhaliwe). Umuntu okukhulunywa ukuthi umsebenzi isekela ukuqaliswa izenzo ezinjalo (kukhona isiqinisekiso esibhaliwe noma benza isivumelwano olwengeziwe amaqembu).
Ihlanganiswe ngu-oda kufanele iqinisekiswe ngabe umqondisi. Ngemva kwalokho, ezinsukwini ezintathu ukudluliswa yayo kumsebenzi. I Lombhalo ufanele ufundvwe, kuvunyelwa ngemvume ngumsebenzi.
Kwezinye izimo, inhloko naphula BTC
Ngo eziningi ezimweni abalwe Wobudlelwano Ikhodi, uMphathi noma umuntu ogunyazwe kuye, kungenzeka ukusebenzisa ilungelo okuhoxisa ekuseni kobudlelwano emsebenzini nomsebenzi, ehlotshiswe nge-BTC:
Nge zokunciphisa isimo.
Uma umsebenzi asikwazi ukumelana nokushintsha kwamandla imithwalo yemfanelo ihlanganisa isikhundla sakhe.
Nge ehlelekile (ezingaphezu kuka kabili ngonyaka) ukwephulwa imithetho isiyalo noma izimiso zokuhle yenkampani.
Uma umsebenzi ufika sesidlulile isikhathi esingaphezu kwamahora amathathu washiya ekuseni (ngesikhathi esifanayo).
Uma umsebenzi sabonakala ngo-izwe elalingelemizi inkampani, esimweni udakiwe.
Lapho ukulahlekelwa okwesikhashana umsebenzi ukukhubazeka, okwaholela engekho isikhathi eside (phezu ezine izinyanga). Ukuxolela zenziwa kulabo abasebenzi ngubani ziyalimala emsebenzini.
Esikhathini ikhomishana ekuziphatheni okubi okungathí sina umsebenzi: ukweba, ukucekela phansi impahla.
BTC kungaba disadvantageous
Abaqashi ukugwema ungene ezivumelwaneni nanini ngenxa ukuvela izibopho ezengeziwe abasebenzi nombuso. Kule isikhundla, nesokuphela kwalesi amalungiselelo uhlobo babe nemiphumela ethile engathandeki elandelayo:
Uma kungenjalo esibekiwe usuku lokuphelelwa isikhathi yesivumelwano, umqashi akunakwenzeka sokuqeda kobudlelwano emsebenzini nomsebenzi. Ukuxoshwa kumele kusekelwe ezizwakalayo.
Umqashi kumele akhokhe umsebenzi besikhuthaza, isinxephezelo nezinzuzo zezenhlalo (isibonelo, ukuze usethe sokubeletha).
Ukuze abasebenzi izinkampani kanye nezinhlangano ezisebenza ku nanini umsebenzi wenkontileka sisihle ngaphezu inkontileka yesikhashana. Nokho, ekunqanyulweni zokugcina ngokuvamile kuba lula futhi eziningi ngokushesha.
Ukunqanyulwa kwe-STD kunesizathu esizwakalayo sokuthi ngoba ukuxoshwa umsebenzi. Ngesikhathi esifanayo, kokuba semthethweni njengoba osebenza ngokuphelele, uyakunikela azise ukuphathwa inkampani amasonto amabili ngaphambi kosuku yosuku lwayo lokugcina lokusebenza.
Kumele kuqashelwe ukuthi umsebenzi wenkontileka levulekile kuyinto elula kakhudlwana futhi isebenziseka ngezindlela eziningi, njengoba kuyasiza nokwandisa ukulawulwa zabasebenzi inqubo.
I ezindawo indawo ye-Afrika. isikhundla ezemvelo nezwekazi